NY ATAON'NY OLONA AVY NAFAHANA TAMIN'NY ASAN'NY MAIZINA (Marka 5:18-20)
Ry havana malala, mahagaga fa ao amin'i Marka dia ahitana matetika an'i Jesoa mandrara ny olona tsy hanambara ny asam-panmonjena nataony. Eto kosa dia tsy izany no mitranga, na dia ao amin'ny Filazantsara arak'i Marka aza ity perikopa ity. Ahazoana manazava izany dia handeha hovalintsika ny fanontaniana hoe: "INONA NO ATAON'NY OLONA VAO NAFAHANA TAMIN'NY ASAN'NY MAIZINA?".
I- NANGATAKA HIARAKA AMIN'I JESOA KRISTY ILAY LEHILAHY VAO AVY NAFAHANA (and 18)
Azo heverina ny hoe: natahotra hiverenan'ny fanahy maloto indray ity lehilahy ity, na ihany koa: tsy te-hiara hipetraka amin'ireo olona nangataka an'i Jesoa hiala amin'ny taniny ilay lehilahy vao avy nafahana. Noho izany, dia naniry izy ny hanaraka an'i Jesoa. Na inona na inona kosa anefa mety ho antony, ny olona vao novonjen'i Jesoa tamin'ny asan'ny maizina dia rariny raha mitady ny HITOETRA EO ANILAN'I JESOA KRISTY SY NY HIFANKAZATRA AMINY.
Tsy navelan'i Jesoa hiaraka Aminy anefa ilay lehilahy vao nohafahina. Ity lehilahy vao novonjena sy nafahan'i Jesoa Kristy tamin'ny asan'ny maizina ity naneho fa efa sitrana izy: naneho izy fa nahatsiaro saina tsara ary naneho izy fa afaka misafidy tsara ny hanaraka an'i Jesoa. Ny olona izay vao avy nafahana tamin'ny asan'ny maizina dia afa-mianatra izany ha hanao safidy hiaraka amin'i Jesoa. Ny fandavan'i Jesoa Kristy ny fangatahan'ity lehilahy dia midika fa tsy tokony hatahotra izy satria, na lavitra ara-toerana aza Izy, dia afaka miaro sy mitarika foana.
II- NANANA ASA NAMPIANDRAKETINA ILAY LEHILAHY VAO AVY NAFAHAN'I JESOA KRISTY (and 19).
Voalohany, nasain'i Jesoa nody ity lehilahy ity, ka hilaza izay zavatra lehibe nataon'ny Tompo taminy sy ny namindrany fo taminy. Ny tanjon'izany dia mba hanomezana voninahitra an'i Jesoa Kristy, sy hampitoetra ireo mpiara-monina azy, ary hanasana azy ireo hino an'i Jesoa Kristy ihany koa. Tsara ny manamarika fa nasaina notorin'ity lehilahy ity dia ny famindrampon'ny Tompo, fa tsy ny fahefany eto. Nasaina nilaza ny fangorahan'i Jesoa Kristy azy izy. Amin'izany tokoa mantsy no hiderana ny Tompo manokana. Ny olona izay vao avy hafahan'i Jesoa Kristy tamin'ny asan'ny maizina dia asaina milaza ny FANGORAHAN'NY TOMPO AZY.
Faharoa, nasain'i Jesoa nitory tamin'ny tany an-tranony ilay demoniaka nafahana. Ny kristiana mahatsiaro ho voavonjy dia tokony HITORY AMIN'NY ANKOHONANY ALOHA, izay vao amin'ny hafa fa tsy maika hitory amin'ny hafa kanefa ny ankohonana tsy mba mandray ny Filazantsara. Ny olona novonjena sy nafahana dia asain'ny Tompo mitory ny amin'izay niaviany aloha vao any amin'ny tany hafa, ary mety koa hatrany amin'ny faran'ny tany aza (Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny faran'ny tany).
III- NITORY NY FAMONJENA ILAY LEHILAHY VAO AVY NOHAFAHANA (and 20).
Tany amin'ny tanin'ny Jisy dia noraran'i Jesoa sy hilazana ny fahagagana nataony, araka ny Filazantsaran'i Marka, satria tsy mitovy amin'ny hevitry ny Tompo ny hevitry ny Jiosy ny amin'ny Mesia izay noheverin'izy ireo ho mpamonjy amin'ny fanjakana Romana. Tany Dekapolisy, izay tsy mba tanin'ny Jiosy fa tanin'ny Jentilisa kosa, raha azaka ny voalaza eto, dia nampirisihan'i Jesoa Kristy ny filazana ny asa mahagaga nataony. Noho izany, i Jesoa Kristy dia mahalala tsara ny tontolo idiran'ny Filazantsara ary arakarak'izany tontolo izany ny fanirahany ny olony hitory izany.
Ny olona vao nafahan'i Jesoa Kristy dia manana trosa amin'i Jesoa Kristy dia ny hanome voninahitra Azy any amin'ireo tsy mino na ny Jentilisa. Toy izany koa isika izay mahatsiaro efa nafahan'i Jesoa Kristy tamin'ny asan'ny maizina. Ankoatra izany dia manana trosa amin'ny olona mbola tsy nandray ny Filazantsara ihany koa isika dia ny mba hampiorina azy ireo ao amin'i Jesoa Kristy
Vokatry ny nataon'ity lehilahy ity dia "gaga ny olona rehetra". Isika koa, raha manefa marina ny trosantsika isika, ka mampiorina ny rahalahintsika amin'i Jesoa Kristy, dia mpiara-miasa amin'ny Tompo hahatonga azy ireo ho gaga Ny irina dia izao: mba tsy hijanona ho fahagagana fotsiny anie ny azy ireo, fa mba ho tonga amin'ny finoana marina an'i Jesoa izy ireo ka hanaiky Azy ho Tompo sy Mpamonjy. Tys ampy mantsy ny hoe "gaga tamin'i Jesoa sy ny asa nataony"; ny mahavonjy dia ny finoana an'i Jesoa!
Raha fehezina ary izay voalaza dia izao: raha mahatsiaro efa nafahan'i Jesoa Tompo tamin'ny asan'ny maizina ianao dia irio sy tadiavo ny hitoetra eo anilan'i Jesoa Kristy sy ny hifankazatra Aminy, asehoy ny safidinao hiaraka MAiny, lazao ny fangorahan'ny Tompo anao, torio amin'ny ankohonanao ny Tompo ary omeo voninahitra i Jesoa sy ampioreno ao Aminy ireo tsy mino
Dia ho an'Andriamanitra irery ny vononahitra! AMEN